၁၀ ရာစု ကတည်းက အသုံးပြု ခဲ့ကြတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းတွေ တွေ့ - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဖြစ်ရပ်မှန် / ၁၀ ရာစု ကတည်းက အသုံးပြု ခဲ့ကြတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းတွေ တွေ့
၁၀ ရာစု ကတည်းက အသုံးပြု ခဲ့ကြတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းတွေ တွေ့
Apann Pyay 6:46 AM ဗဟုသုတအစုံ , ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ထူးဆန်းတဲ့ ကံကြမ္မာ တွေရှိ နေတတ်ပါတယ်။Derek McLennan ကတော့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ ပြီး ပေါင် ၁.၉ သန်းကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပါပြီ။Derek McLennan ဟာ လယ်ယာမြေထဲမှာ သတ္တု ရှင်းလင်းရေးပြု လုပ်နေတုန်း Viking လူမျိုးတို့ရဲ. ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကို တွေ့ရှိ ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ကွင်းပြင်ထဲမှာ သံရိုက်သည့် တူတစ်ချောင်းမေ့ကျန်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက် သတ္တု ရှာဖွေရေးစက်နဲ့ ရှာဖွေနေစဉ်မှာ ရွှေဒင်္ဂါးပြားတွေကို တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေထဲမှာ ငွေဒင်္ဂါးတွေ၊ရွေလက်စွပ်တွေ အပါအ၀င် အခြားသော ဘာသာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းပုံစံများစွာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်သူဟာ အလျှင်အမြန်ပဲ ချမ်းသာသူအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။
ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေဟာ ၁၀ ရာစု ကတည်းက အသုံးပြု ခဲ့ကြတဲ့ ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပေါင် ၁.၉၈ သန်းခန့် တန်ကြေးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခုတွေ့ရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း အမျိုးအစား ၂၀၀ ကို National ပြတိုက်တွင် ပြသထားမည်ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရတယ်။
Gold chalice in County Tipperary - worth £50,000
Pure gold cross inafield in Nottinghamshire - worth £25,000
52,000 3rd century coins in Frome - worth £320,000
#Via. Zeno Oo.#
လူတိုငျးလူတိုငျးမှာ ထူးဆနျးတဲ့ ကံကွမ်မာ တှရှေိ နတေတျပါတယျ။Derek McLennan ကတော့ ရှေးဟောငျးပစ်စညျးတှေ ကို ရှာဖှတှေရှေိ့ ပွီး ပေါငျ ၁.၉ သနျးကြျောကို ပိုငျဆိုငျသှားခဲ့ပါပွီ။Derek McLennan ဟာ လယျယာမွထေဲမှာ သတ်တု ရှငျးလငျးရေးပွု လုပျနတေုနျး Viking လူမြိုးတို့ရဲ. ရှေးဟောငျးပစ်စညျးတှကေို တှရှေိ့ ခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
သူဟာ ကှငျးပွငျထဲမှာ သံရိုကျသညျ့ တူတဈခြောငျးမကေ့နျြပြောကျဆုံးသှားတဲ့အတှကျ သတ်တု ရှာဖှရေေးစကျနဲ့ ရှာဖှနေစေဉျမှာ ရှဒေင်ျဂါးပွားတှကေို တှရှေိ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ရှေးဟောငျးပစ်စညျးတှထေဲမှာ ငှဒေင်ျဂါးတှေ၊ရှလေကျစှပျတှေ အပါအဝငျ အခွားသော ဘာသာရေးနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ရှေးဟောငျးပစ်စညျးပုံစံမြားစှာလညျး ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့သူဟာ အလြှငျအမွနျပဲ ခမျြးသာသူအဖွဈပွောငျးလဲလာခဲ့ပါတယျ။
ရှေးဟောငျးပစ်စညျးတှဟော ၁၀ ရာစု ကတညျးက အသုံးပွု ခဲ့ကွတဲ့ ပစ်စညျးမြားဖွဈပွီး ပေါငျ ၁.၉၈ သနျးခနျ့ တနျကွေးရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ ယခုတှရှေိ့တဲ့ ရှေးဟောငျးပစ်စညျး အမြိုးအစား ၂၀၀ ကို National ပွတိုကျတှငျ ပွသထားမညျဖွဈတယျလို့လညျး သိရတယျ။